MIISAANKA MADAW IYO NOOCYO KALA DUWAN: WAXA AY U EG TAHAY, MEESHA AY KU KORAAN MARKA LA GOOSTO - MUSHROOMS
Boqolkiiba caanaha waa boqoshaada oo si gaar ah ugu caan ah kubbadaha. Kaynta, oo ay ku jiraan boqoshaada caanaha, waa raad dhabta ah ee wax lagu kariyo. Inkasta oo ay caan ku yihiin, Gordiyayaashu waxay ka qariyaan indhaha aadanaha waxayna ku qariyaan caleenta meel u dhow mugdi iyo hillocks kala duwan. Sidaa daraadeed, adigoo raadinaya noocyada noocan ah ee mycobionts, waxaa fiican inaad qaadato adigoo si joogto ah u baaraya dhammaan meelaha ay boqoshaada caanuhu koraan. Black Caano waa badeecad caan ku ah karinta, maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa cuntooyinka ugu caansan ee loogu talagalay diyaarintiisa, sida qoyaanka caanuhu u egyihiin, noocyada kala duwan.
Ma taqaanaa? Caanaha ayaa caan ah tan iyo wakhtigii Kiev Ruush. Soo jiidashada sida loo yareeyo huurada, awowayaasheen wakhtiyadii hore waxaa loo yaqaan "ta" ama "pile". Tani fangaska marnaba ma korto kali, laakiin kaliya beerashada kooxda.
Maxay u egtahay gruzd: sharaxaadda noocyada caanka ah ee boqoshaada
Qodobbo madow ah ayaa ah boqoshaada oo soo saaraha miisaanka oo khibrad u leh si fudud loo aqoonsan karo, laakiin kuwa aan aqoon u lahayn noocyadaas, waxaan ku siin doonaa sharaxaad: duqsigu waa wakiil ka tirsan qoyska Russula, cirifka larch. Hadda waxaa jira qiyaastii 20 nooc oo jeexan, kuwaas oo si fiican loo darsaday oo la sharaxay - qaar waa la cuni karaa, qaar baa loo arkaa inay yihiin kuwo la cuni karo.
Goobta guduudan waxaa loo tixgeliyaa noocyada caanaha lagu noolaan karo ee ka tirsan qaybta 2aad. Lugta gruzdya celcelis ahaan 6-8 cm ee dhererka iyo 2-3 cm dhexroor. Cap wuxuu noqon karaa ilaa 15 cm dhexroor. Qalbi-qaabeeya, wax yar ayaa la duubay. Daboolka mundinka waxaa lagu dabooli karaa filim dabacsan oo ku xiran kaymaha ay ku koraan - waxay ku xiran tahay heerka qoyaanka. Midabku way kala duwanaan kartaa, midabku wuxuu ku kala duwanaan karaa saytuunka madow ilaa bunka qoto dheer.
Waa muhiim! Bartamaha xuddunta, midabku waa laba ton oo midab madow ka badan geesaha.
Sida jilaalka intiisa kale ee qoyska Mlechnikov, cufnaanta waa la jilicsanaa casiirka lakansan, iyo qaabka unugyada waa sida in ay si fudud u dhuujin karaa. Badanaa, meelaha ay ka samaysan yihiin caaga madow waxay yihiin gooyn, bjørk iyo geedo qallalan, waddooyin yar yar oo la yaqaan, caleen iyo xiniinyaha. Waxaad qaadan kartaa caanaha madow ilaa dhammaadka dayrta. Caadi ahaan, guluubka madow waxaa loogu yeeraa "gypsy" ama koofurta musqusha, sidoo kale Poland waxaa loo tixgeliyaa inay tahay geedka. Si kastaba ha noqotee, madow madow wuxuu u fiican yahay pickling iyo wuxuu dhadhamin karaa dhadhanka muddo dheer - ilaa 3 sano.
White gruzd - mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee boqoshaada. Dadka qaata mushaharka waxay sidoo kale ugu yeeraan "qoyaan qoyan" ama "qulqulaya". Haatan waxan kuu sheegi karnaa sida iyo halka cagaarka caanaha cadaanku koraan: waxay ku koraan dhirta dhirta qorraxda, sameynta mycorrhiza oo geedo ah, waxaana mar walba loo diyaariyaa kooxo waaweyn. Inta badan inta badan fangaska waxaa laga helaa gobollada galbeedka ee Siberia, ee Ural, gobolka Volga. Marka la waydiiyo goorta boqoshaada caddaan ah la goosto, jawaabtu waa: xilliga jiilaalka ee boqoshaadani waxay bilaabmaa horraantii Agoosto (mararka qaarkood waxaa laga heli karaa dhamaadka bisha Luulyo) waxayna ku dhammaanaysaa Sebtembar. Way ka fiican tahay in la soo qaado boqoshaada bartamaha muddadan, ka dibna waxay leeyihiin dhadhanka ugu sareeya. Da'da qaangaarka ah, koofiyadaha cad waxay koraan ilaa 20 cm dhexroor, luguna waxay kor u kacdaa ilaa 7cm. Dhibcaha likaha ayaa cufan ku jira dhismaha, iyo goortii la gooyey, wuxuu soo baxaa kokan hodan ah. Aragtida midabka caddaanku waa midka ugu caansan ee dhammaan caarada: cidhadu waa caddaan tahay dhibco jaale ah, daboolkiisu waa mid adag, badiyaa caleemo ama qaybo ka mid ah laamaha ayaa ku yaal.
Ma taqaanaa? Haddii aad dareentid dhibco yaryar leh dusha cad, waxa fiican inaad diiddo inaad sameyso, sababtoo ah mulkiilahan horeyba waa mid aad u badan.
Pepper Pile (dhabta ah)
Musqusha qashinka ah waa mid leh boqoshaada oo inta badan ku kordha kaymaha ballaaran, laakiin mararka qaarkood waxaa laga helaa beerto waaweyn. Waxaad soo qaadan kartaa noocaan ah likaha laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar. Tilmaamaha basbaaska: Lugta 7cm sare ah, dhexdhexaadku wuxuu ka kooban yahay 7 illaa 20 cm, qaabka furka ayaa isbeddelaya, hadba ku xiran heerka qaangaadhka fangaska: marka qoobku uu yaryahay, daboolku waa qaabka isbeddelka, ka dibna wuxuu noqdaa mid jilicsan, oo leh geeso hoose. Koofiyadu waa caddaan, ugu dambayntii waxay ku daboolan yihiin hurdi jaalle ah, bunni iyo cawl. Khamriga basbaasku wuxuu kiciyaa shaki ku saabsan suurtogalnimada ku haboonaanta isticmaalka bani'aadamka: qaar ayaa sheegaya in ay tahay nooc dabiici ah oo la cuni karo, qaar kale waxay yiraahdaan lama cuni karo, isaga oo ku doodaya in saxarka la siiyo dhadhanka basbaas.
Waa muhiim! Way fududahay in lagu qalqaliyo basbaaska basbaas oo leh qalalan qalalan, laakiin waxaa jira farqi u dhexeeya iyaga: lugaha basbaasku way ka sarreeyaan, cabitaanka caanuhu wuu ka sii badanyahay.
Inkasta oo dhammaan muranka, peppermint ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqameed: waxtarkeeda anti-kansarka ee jirka ayaa horay loo xaqiijiyay, sidoo kale wuxuu leeyahay hanti fungal ah. Shiinaha, waxaa loo isticmaalaa in lagu nasto muruqyada.
Boom huruud ah
Caddadka jaalaha waa wakiil ka mid ah fasalka Syroezhkov, caan ka mid ah lactifolia, qoyska Agaricomycetes. Koofiyada jaallaha ahi waa ilaa 15 cm dhexroor, waxay bedeshaa qaabka koritaanka - marka ugu horeysa ee kabtanku waa mid isku xiran, oo leh meel dhexda dhexe ah, waqti ka dibna wuxuu noqdaa mid niyadjabsan, oo hindhisada qaabeeya geesaha. Midabka fangaska wuxuu noqon karaa dahab dahab ah ama midab leh oo jaalle ah. Xaaladaha qoyaan badan oo ku yaal daboolka huurada xuubka ayaa la sameeyaa. Lugta cirifka ah wuxuu koraa ilaa 6 cm oo dherer ah iyo 4 cm dhexroor. Lugaha midabka - cirro huruud ah, oo leh dhibco madow. Xidhanka xididada, waxay hoos u dhacdaa. Mushaharuhu wuxuu ka mid yahay boqoshaada xaalad ahaan la cuni karo ee qaybta 2aad. Waxa ugu ballaaran ee loo qaybiyo Siberia iyo Central Russia. Xilliga ugu wanaagsan ee la ururiyo noocyada noocan ah waa muddadii u dhexeysay Agoosto ilaa dhammaadka Oktoobar.
Ma taqaanaa? Miisaannada cagaarshowga badanaa waxaa laga soocaa mowjado huruud ah, laakiin tani waa noocyada isku midka ah, oo leh magac ka duwan gobollo kala duwan.
Qoryaha Aspen (cagaarka)
Qoryaha Aspen (Lactarius controversus) ayaa caadi ahaan loo yaqaan "aboor". Waxay ka mid tahay boqoshaada xaalad ahaan la aqonsado sababtoo ah xaqiiqda ah in saxarka uu leeyahay casiir gubane-qadhaadh oo ka baxo ur ah jilicsan, dhaxan. Magaca hore wuxuu soo jeedinayaa fikradda ah nooca noocaan ah uu korayo: inta badan waxaa laga heli karaa daaqada ama keynta aspen. Kaadida Aspen waa mid weyn oo cabbirkeedu yahay 30cm dhexdhexaad. Qoryaha Aspen badanaa waa ay ku wareersan yihiin cadaan, laakiin waxaa jira farqiga udhexeeya faraqa u dhexeeya: timo jarida ayaa ah mid aan loo dhigin. Midabka daboolkiisu waa caddaan cad, marmarka qaarkoodna leh cagaar jaale ah, oo lagu qurxiyo dhibco madow. Dhibaatada noocyada noocan ah waa wasaqda daboolka daboolka, kaas oo laga soo qaaday wakhtigii fangaska la sameeyay oo dhulka hoostiisa ah.
Waa muhiim! Qoryaha Aspen wuxuu ku haboon yahay oo kaliya salting iyo kiis lama isticmaali karo qalajinta.
Xaggee ayuu ku koraya xajmiga: qaababka ururinta
Hadda, markaan hore u ogaanay muuqaalka caanaha caanaha iyo noocyada caanaha, aynu ka hadalno meesha ay tahay inay raadiyaan iyaga iyo sida ugu fiican ee loo soo ururiyo. Uruurinta Gruzdy waxay bilowdaa bisha Agoosto - ka dibna dhabta ayaa muuqata. Badanaa waxaa laga heli karaa kaynta geed-geedka canjiga ah, ee kaymaha boodhka ah, mararka qaar beerashada cagaaran iyo buuraha buuraha. Boqoshaada caanuhu waa boqoshaada waaweyn, waxayna tixgelinayaan in ay ku koraan kooxo, waxaad isku ururin kartaa dambiil ah boqoshaada hal glade.
Waxay ka fiican tahay in la ururiyo boqoshaada caanaha ka dib ganaax, oo loo yaqaan "mugta" roob. Kadibna waxay soo qaadaan boqoshaada dhexdhexaad ah - waxaa lagu kaydin doonaa waqti dheer, laakiin boqoshaada ka baxsan ayaa lagu degi karaa gooryaanka. Ka dib markii roobka la shubo, laguma talinayo in la soo ururiyo likaha, maadaama ay sii xumaanayaan. Waa lagama maarmaan in la soo ururiyo boqoshaada, si taxadar leh u jarida lugta u dhow dhulka, oo aan si kasta u jiidin. Ma aha lagama maarmaan in caanaha caanaha loo dhigo si taxadar leh, sidaas darteed waxaa jira meel u dhaxeysa boqoshaada, sababtoo ah haddii aad tampirto, way dhaawacmi karaan.
Ma taqaanaa? Qaar ka mid ah picking mushroom khibrad leh, marka ay soo ururiyaan boqoshaada caanaha, ku tiirsanaanta miraayad, go'aaminta meesha boqoshaada by isku dar ah oo ah ur ah ur ah boqoshaada, miro iyo malayga ama basbaas.
Badanaa waxaad rabtaa in aad ururiso boqoshaada cusub ee saxda ah ee goobtaada, iyo golaha muusigga musqusha waxaa jira su'aalo ku saabsan sababta aysan suurtagal ahayn in kor loogu qaado boqoshaada caanaha guriga. Arin ahaan, waxaa suurtogal ah in la sameeyo tan, inkastoo ay tahay mid aad u dhib badan, maxaa yeelay tiro badan ayaa ku koraya xuduudaha geedaha, sameynta jeermisyo. Sababtoo ah mycelium waxay u muuqataa xididdada geedaha. Intaas waxaa dheer, boqoshaada caanuhu waxay ku xiranyihiin noocyada dhirta qaarkood, taas oo sii xoojinaysa geedi socodka koritaanka guriga.
Cunnooyinka lagu sameynaayo buufin: salting, saliid, saliid
Shaah madow waxay leedahay dhadhan aad u sareeya, sidaas darteed shaqaaluhu waxay soo saareen cuntada sida badan loo diyaariyo boqoshaada. Si kastaba ha ahaatee, diyaarinta cabitaanka caanuhu waxay qaadataa wakhti dheeraad ah, sababtoo ah joogitaanka cabitaanka milanka ee ka kooban, waxay u baahan yihiin in lagu qooyo wakhti dheer. Boqol caano ah ayaa badanaa la cusbaynayaa, la kariyaa, iyo kuwa aan rabin inay sugaan jiilaalka inay cunaan boqoshaada, iyaga isku darka ka dib goosashada.
Waa muhiim! Habka ugu fiican ee boqoshaada caanaha goynta waa marinating, maxaa yeelay halkan boqoshaada caanaha ayaa lagu daaweeyaa kuleylka.
Hab kasta oo aad cunto karisid aad dooratid, marka hore waxaad u baahan tahay inaad ku qoyntid boqoshaada caanaha 3 maalmood, si joogto ah u beddel biyaha. Wixii salting, waxaa ka wanaagsan in la doorto dhalooyinka, dhoobada ama qurxinta iyada oo aan lahayn dildilaacyo ama dhoobo, iyada oo aan si adag u xirin si looga fogaado halista ka iman karta jeermisyada waxyeellada leh ee saxanka.
Cuntada ugu caansan ee salting salmon waa kuwa soo socda: waxaad u baahan doontaa 5 kg oo ah boqoshaada iyo 2 koob oo cusbo, waxaad sidoo kale u baahan tahay cherry ama caleemo currant, dill oo aan dallad, dhowr oo toon ah oo toon ah. Caanaha jelly waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo, qooyo, iyo si fiican loo dhaqo. Ku dar boqoshaada maqaayad ballaaran oo ku dabool biyo qabow, dabool dabool. Xagga sare waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo "miisaan culus", taas oo ah bangigan ka buuxsamay biyo ayaa ku habboon. Awoodda leh boqoshaada ku riday meel qabow, badalida biyaha dhowr jeer maalintii. Saddex maalmood ka dib, boqoshaada waxay u baahan yihiin inay helaan. Mid kasta oo lafdhabarta ah waxaa lagu moosay cusbo waxaana lagu dhajiyay lakabyo, oo lagu beddelay toonta iyo malayga, taargooyinka la jarjaray. Boqoshaada Layered daboolay faashad, on top of faashad jiifay caleemaha fardaha, currants iyo jeeriga. Mushrooms waxay ka hooseysaa harqoodka bisha oo meel qabow ah. Waa lagama maarmaan in la hubiyo in boqoshaada aysan aheyn kuwo caaryare ah, oo ku shub brine. Bil ka dib, waxay ku faafaan bangiyada hore loo qaabeeyey oo dabool leh dabool. Sida marinating, halkan waxaad isticmaali kartaa khal iyo cusbo diyaarinta brine, iyo sidoo kale ku darista dhirta kala duwan. Habka ugu caansan ee pickling waa pickling toon, basbaaska, geed isbonji ah iyo caleen, iyo tooyo ayaa sidoo kale lagu dari karaa. Geedi socodka samaynta likaha sida waa mid fudud: nadiif ah, qoynin iyo raaci boqoshaada caanaha. Geli dabka oo isku karsaaraya. Mushrooms waa inay karkariyaan 10 daqiiqadood. Habka wax lagu kariyo, waa inaad si joogto ah uga saartaa xumbada laga soo bilaabo boqoshaada, dhamaadka karinta - iska ilaali boqoshaada dibna shaandheeyo oo biyo raaci biyo. Marinade waxaa loo diyaariyaa sida soo socota: 2 kg oo ah salmon waxaad u baahan doontaa 1 litir oo biyo ah, 2 tbsp. l cusbo iyo dhir udgoon inay dhadhamiyaan. Dhammaan maaddooyinka - labadaba dareeraha iyo qallalan - qaso iyo isku kari ilaa 15 daqiiqadood ka dib karkarinta. Caleemaha caleemaha iyo caleemaha currantka ah ayaa la dhigayaa hoosta kusaddii, dill, sare, boqoshaada aan aad u dhicin, ku shub marinade heerka qoorta oo ku dar 1 tsp of 9% khaldi kasta oo ku jirta.
Waxaa ugu wanaagsan in la xiro gasacadaha leh daboolka biyaha la kariyey oo ku duub buste kulul ka hor qaboojinta. Ku sii boqosha boqoshaada si fiican u qabow meel qabow.
Kufsashada Mushrooms - marwalba waa geedi socod dheer, iyo sida shimbirta bakeeriga ah, kiiskani wuxuu diyaar u noqon karaa laba cisho: laba cisho oo qoyan ayaa la qooyay, ka dibna la kariyay 2 jeer, karkarin iyo karkarin biyo karkaraya 5 daqiiqo. Boqoshaada diyaarka ah waa in la jarjarey (waa ay fiicantahay in ay isticmaasho kabaha kaliya) oo ha ku shubin digsiga iyada oo aan saliid lahayn, daboolo oo dufaan ilaa 10 daqiiqo. Juice, kaas oo siin doona boqoshaada, waa in aad daadi. Mushrooms waxaa lagu daraa saliidda khudradda, toonta iyo dhirta oo la shiilay ilaa bunka dahabka ah.
Ururinta boqoshaada had iyo jeer waa wax xiiso leh, laakiin inta lagu jiro ururinta khamriga caanaha waxaad dareemi kartaa sida saxda ah dhabta ah iyaga oo raadinaya godadka caleemaha. Intaa waxaa dheer, waxay ku darayaan miiska weyn.